ပင်မစာမျက်နှာ » နောက်ဆုံးရဆောင်းပါးများ » Breaking ခရီးသွားသတင်းများ » ခရီးသွားခြင်းမှ ငြိမ်းချမ်းခြင်း - မသာသော်လည်း၊
Breaking ခရီးသွားသတင်းများ • ယဉျကြေးမှု • သတင်း • တာဝန်ရှိသော • ခရီးသွားလုပ်ငန်း • Travel ကြေးနန်းသတင်းများ • ယခုခေတ်စား
by မက်စ် Haberstroh
မှရေးသား မက်စ် Haberstroh
ငြိမ်းချမ်းရေးသည် စစ်မရှိခြင်းထက် ငြိမ်းချမ်းရေးမရှိ၊ ခရီးသွားမရှိ၊ စစ်အတွင်းက ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ သူရဲကောင်းတွေရှိပေမဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးမှာ 'အသံတိတ်သူရဲကောင်းတွေ' ရှိတယ်။ COVID ကာလတွင် သူနာပြုများ၊ ဆရာဝန်များ၊ ရှေ့တန်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာ SME ဟိုတယ်၊ စားသောက်ဆိုင်နှင့် အရက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်နှင့် ကုသရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုများအပြင် တတ်နိုင်သမျှ နှာခေါင်းစည်းများနှင့် ခပ်ခွာခွာနေခြင်းများကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပြီး အခြားသော lock-down သည် လုပ်ငန်းကို ပျက်စေမည်ကို သိရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ရေကြီးလာသောအခါ လယ်ကွင်းများ၊ အိမ်များ၊ ပြည်သူများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ ပျက်ပြားသွားသောအခါ အနီးအဝေးမှ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများသည် ပရဟိတအကျိုးအတွက် အလျင်အမြန် သွားရောက်ကူညီခဲ့ကြသည်။
လူတွေက စိတ်ပါလက်ပါ လှူကြတယ်။
တောမီးများ လောင်ကျွမ်းပျက်စီးသွားသော ဒေသများတွင် ရဲရင့်သော မီးသတ်သမားများ၊ မကြာခဏ မီးမုန်တိုင်းများ၏ စွမ်းအားထက် မမျှော်လင့်ဘဲ ပြင်းထန်စွာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သည်အထိ နေ့ရောညပါ အပြင်းအထန် ဆင်နွှဲခဲ့ကြသည်။
ရုတ်တရတ်၊ အတ္တစိတ်၊ အယူဝါဒနှင့် နှစ်သိမ့်မှုဇုန် သတ်မှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အကျင့်ဆိုး၏ လက္ခဏာများအဖြစ် ရှုတ်ချခံရကာ နှင်ထုတ်ခံရသကဲ့သို့ ခံစားခဲ့ရပြီး သင့်အိမ်နီးနားချင်းကို ချစ်လိုစိတ်ကလွဲ၍ အခြားအရာများကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပါ။ Cataclysms များသည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဥပဒေများကို ဖန်တီးကြသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးအချိန်သည် ၎င်း၏သူရဲကောင်းများရရှိထားပြီး၊ အန္တရာယ်နှင့် ဘေးဥပဒ်အခြေအနေများတွင် လူတို့သည် ၎င်းတို့၏တစ်ဖက်ကိုပြသနိုင်သည်—၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။
အလုပ်က ခက်ခဲတယ်၊ ဆုတ်ယုတ်မှုတွေက အစစ်အမှန်၊ အကောင်းမြင်စိတ်က အရေးကြီးတယ်။ ချက်ချင်းအရေးပေါ်အခြေအနေသည် ရှေးဦးစွာ လျင်မြန်စွာ အကူအညီများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော်လည်း၊ တဖြည်းဖြည်းသေဆုံးသွားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများသည် ချက်ခြင်းလုပ်ဆောင်ရန် လူတို့၏အသိဉာဏ်အပြည့်အဝ ပျောက်ဆုံးနေပါသည်။ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ရရှိလာသော ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် အသီးအနှံများကို အချိန်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး ချန်ပီယံများအတွက် တစ်ဦးချင်းအခွင့်အရေးများ 'တောက်ပ' ရန် စောင့်မျှော်နေပါသည်။
ယေဘူယျအားဖြင့်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအချိန်နှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် သူရဲကောင်းဆန်မှုသည် အံ့မခန်းနည်းသော်လည်း တန်ဖိုးနည်းသည် (“သူရဲကောင်းပီသမှုမှာ သံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိ” ဟု ဆိုပါသည်။ အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း) ငြိမ်းချမ်းရေးသည် ကိုယ်ကျိုးရှာသူမဟုတ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဆောင်မှုရလဒ်ဖြစ်သည်။ ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ် ခရီးသွားနှင့် ခရီးသွားလာရေး အမှုဆောင်အရာရှိများအတွက် အမှန်တကယ်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခု ပံ့ပိုးပေးသည်ဟု ပြောနေစရာပင်မလိုတော့ပါ။
ခရီးသွားများအနေနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အားလပ်ရက်များအတွက် ပိုက်ဆံပေးရသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အားလပ်ရက်များကို ၎င်းအတွက်ပေးဆောင်သည့်ငွေထက် ပိုမိုမြင့်မားသော ကျွန်ုပ်တို့၏အားလပ်ရက်များကို ပျော်ရွှင်စွာပျော်မွေ့ခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ရှင်များ၏ ဧည့်သည်ဖြစ်ခွင့်အခွင့်အရေးအကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိသင့်သည်။ လူမှုဆက်ဆံရေးသည် အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရန် သော့ချက်ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဧည့်သည်များကို ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်သည့် ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုဖြင့် သူစိမ်းများထံမှ ရန်လိုသော သိမ်းယူမှုမျိုးအဖြစ် အဆုံးသတ်ရန် ခြိမ်းခြောက်နေသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ခံစားရပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုရေးအရ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုမှာ ပြင်းထန်စွာချိုးဖောက်ခံရပါသည်။ ချိုးဖောက်မှုနှင့် မသမာမှုများဖန်တီးခြင်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်စေသည့် အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ရုပ် (ပြင်ပ) နှင့် အကြားအာရုံ (အတွင်း) 'ပတ်ဝန်းကျင်' နှစ်ခုစလုံးအတွက် ကောင်းသောအရာကို သိနိုင်စေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ 'မျက်လုံး' နှင့် လူသားချင်းစာနာမှုတို့အတွက် ထက်မြက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အချင်းချင်း ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ဆက်ဆံတတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အနေနဲ့ ကိုယ့်ရင်ထဲမှာ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း အမြစ်တွယ်နေမယ်ဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းမှု ရှိတယ်။ ခရီးသွားခြင်းနှင့် ခရီးသွားလာရေးသည် ကောင်းမွန်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆိုးသော အလေ့အကျင့်အတွက် ကမ္ဘာ့စင်မြင့်ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ တစ်ချိန်က တစ်စုံတစ်ယောက်က ပြောဖူးသည်ကား၊ မမြင်နိုင်သော မျက်လုံးနှင့် တူ၏။ ဓာတ်ပုံဆရာ၏ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲနေသော အရည်အချင်းများနှင့် ဆင်တူသည့် ၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ကို ၎င်း၏အမြင်ကို အာရုံခံနိုင်စေရန် သင်ယူနိုင်သည်။
နိုင်ငံတကာ နားလည်မှုကို မြှင့်တင်ရန် ခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ ပျံသန်းမှု မြင့်မားသော တောင်းဆိုချက်ကို ကြည့်ပါက၊ အဆိုးဆုံးမှာ ၎င်းသည် အတုအယောင် (ဥပမာ- အားလုံးပါဝင်သည့် ခရီးသွားခြင်း) ဖြစ်သည်၊ အကောင်းဆုံးမှာ စိတ်ကူးယဉ်တွေးခေါ်မှုဖြစ်သည်။ စိတ်စွန်းကွက်မှုများ ပျောက်ကွယ်သွားမည့် ကာယကံရှင်များ မျှဝေထားသော ဒဏ္ဍာရီကို ကျက်စေပြီး၊ ဤကဲ့သို့ ဖြစ်မလာစေရန် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် မျှဝေထားသော တိတ်ဆိတ်သော မျှော်လင့်ချက်ကို ခရီးသွားများကို နှိုးဆော်ကာ ကျွန်ုပ်တို့၏ စံပြုယူဆချက်များအတိုင်း ရပ်တည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒေသခံတွေထက် ကျနော်တို့က ချင်းလူမျိုးတွေနဲ့ တွေ့တယ်။ နိုင်ငံတကာ နားလည်မှုအပေါ် ရည်ရွယ်ထားသည့် အောက်ခြေမှ အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်ပါသည်- အလည်အပတ် ခရီးစဉ်များတွင် ပါဝင်ခြင်း၊ အိမ်ရှင်၏ အချက်အပြုတ်အနုပညာကို နှစ်သက်ခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်စုံစျေးဝယ် ဂိမ်းဆိုင်များမှတဆင့် ရှာဖွေနေသော်လည်း အားလပ်ရက် အဆက်အသွယ် အများစုသည် ကြိုကြားကြိုကြားနှင့် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးသာ ဖြစ်ပါသည်။ တခါတရံ ခရီးသွားပုံစံများကဲ့သို့ အချိန်နှင့်အမျှ ပျောက်ကွယ်သွားတတ်ပါသည်။
ယခင်က အလွန်ထူးခြားသော လူမှုရေးအမှတ်အသားများသည် မှုန်ဝါးခြင်း သို့မဟုတ် လုံးလုံးလျားလျား ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းတို့ကြောင့် 'Tourism Unlimited' ၏ အပြင်ပန်းအသွင်အပြင် ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ သီးသန့်ဟု သတ်မှတ်ခံထားရသည့် အားလပ်ရက်ခရီးစဉ်များကို မည်သည့်ကက်တလောက် သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်တွင်မဆို ကမ်းလှမ်းလျက်ရှိသည်။
အချို့သောနေရာများသည် အထူးထူးထူးခြားခြား အသွင်ကူးပြောင်းမှုတစ်ခုကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရပြီး ဥပမာ- Baden-Baden- ယခင်က 'ဥရောပ၏ နွေရာသီမြို့တော်' အဖြစ် နာမည်ရခဲ့သော၊ ချမ်းသာပြီး လှပသူများသည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင် 'Vanity Fair' တွင် ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြရာ၊ ယနေ့ spa-city သည် နာလန်ထရာနေရာဖြစ်ပြီး၊ ဖောက်သည်များအတွက်တောင်မှ လူမှုဖူလုံရေး။ – သို့မဟုတ် နူးညံ့သိမ်မွေ့သော ရာသီဥတုတွင် ကမ္ဘာ့အထက်တန်းစားများ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခဲ့သည့် ထင်ရှားကျော်ကြားသော သန့်စင်ခန်းများတွင်ရှိသော Madeira ကို ရွေးချယ်ပါ- ယနေ့ ကျွန်းနိုင်ငံသည် အပျော်စီးခရီးနှင့် ပက်ကေ့ခ်ျခရီးသွားရန် နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထို့ထက်အရေးကြီးသည်မှာ ဗင်းနစ်၏ဖြစ်ရပ်မှာ- ကုလသမဂ္ဂကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်းဝင်အဖြစ် ထင်ရှားသော ဗင်းနစ်မြို့သည် ရေငန်မြို့၏တည်ဆောက်ပုံအနှစ်သာရနှင့် ဒေသခံပြည်သူများ၏သာယာအေးချမ်းမှုကို ခြိမ်းခြောက်နေသော အားကြီးသော အပျော်စီးသင်္ဘောများမှ ရေတိုခရီးသွားများ မကြာသေးမီအထိ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ ဒေသခံတွေက ဒီလိုကျူးကျော်မှုမျိုးကို သူတို့ရဲ့မြို့နဲ့ သူတို့ရဲ့ လူမှုဘဝအတွက် တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုလို့ မှတ်ယူကြပါတယ်။
အခြားနေရာများတွင်လည်း အလားတူအခြေအနေမျိုး တွေ့ရသည်- တစ်ချိန်က ခမာဘုရင်များ၏ ဘုန်းတန်ခိုးကြီးသော ဟိန္ဒူ-ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်းမြို့တော်ဖြစ်သည့် အန်ကောဝပ်သည် ၁၅ ရာစုမှစတင်၍ ပျက်စီးယိုယွင်းလာပြီး မေ့မြောသွားခဲ့သည်။ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်း (!) နှင့် လူ့အသိုက်အဝန်းများသည် အန်ကောဝပ်ကို ပြိုလဲစေသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
၁၉ ရာစုတွင် ပြင်သစ် စူးစမ်းရှာဖွေသူများသည် အပျက်အစီးများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး Angkor ကို နေ့အလင်းရောင်အဖြစ် ယူဆောင်လာခဲ့သည်။ ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲအပြီးတွင် ကွန်မြူနစ် ခမာနီများက သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်။ ယနေ့တွင် ခမာနီများ ပျောက်ကွယ်သွားကာ “မျောက်များနှင့် ခရီးသွားများ” (ဩစတေးလျ သမိုင်းပညာရှင် ခရစ်စတိုဖာ ကလာ့ခ်) သည် အန်ကောဝပ်နှင့် အန်ကောသမ်၏ အထင်ကြီးစရာကောင်းသော ဘုရားကျောင်း အပျက်အစီးများကို ပြန်လည် သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်။
'Expansion du Tourisme' တွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနှင့် စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ( tim-team) မှ မစ္စ Anita Pleumaon က ဤသို့ အကျဉ်းချုံးဖော်ပြသည်- “လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသော အာရှလူ့အဖွဲ့အစည်းများအပေါ် ချမှတ်ထားသော ခေတ်မီတန်ဖိုးများသည် အထူးဆိုးရွားသော အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ကမောက်ကမ ခံစားချက်တို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပုံရသည်။ ဖယ်ခွာခြင်း၊ ကသောင်းကနင်းနှင့် စိတ်မရှည်ခြင်း။ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် တစ်သားတည်းဖြစ်တည်မှု လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် အိုင်ဒီယာအသစ်များ၊ ရုပ်ပုံများနှင့် သတင်းအချက် အလက်အသစ်များ၏ ပျံ့နှံ့မှုသည် ဓလေ့ထုံးတမ်းများ၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ဖော်ပြမှု၊ မိသားစုနှင့် အသိုင်းအဝိုင်းတန်ဖိုးများအတွက် နေရာအနည်းငယ်သာ ကျန်တော့သည်” ၎င်း၏ ယုတ္တိဗေဒနှင့် နည်းစနစ်သည် အနောက်တိုင်းပုံစံ ပုံစံများအတိုင်း လိုက်နာသောကြောင့် ပန်းတိုင်သို့ ဦးတည်ရာသို့ ချဉ်းကပ်ခြင်းမှာ အစွန်းနှစ်ဖက်ရှိ ဓားတစ်လက်ကို တည်ဆောက်ခြင်းလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ခိုင်လုံသော 'ဦးတည်ရာတည်ဆောက်ခြင်း' နှင့် 'နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ခြင်း' ၏ စစ်အေးခေတ်လွန်အယူအဆကြားတွင် တူညီမှုများရှိပါသလား။
အနောက်တိုင်းပုံစံ ဒီမိုကရေစီနှင့် နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေး၏ အရက်စက်ဆုံးသော အထောက်အထားများကို အာဖဂန်နစ္စတန်တွင် မြင်တွေ့နိုင်သည်။ အာဖဂန်နစ္စတန်သည် 1960 နှင့် 70 ခုနှစ်များအတွင်း စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ခရီးသွားနေရာတစ်ခုနှင့် ဥရောပမှကျောင်းထွက်သူများအတွက် ကောင်းကင်ဘုံတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံဖြစ်သည့် 1989 ခုနှစ်တွင် ဆိုဗီယက်စစ်တပ်နှင့် 2021 ခုနှစ်သြဂုတ်လတွင် အမေရိကန်ဦးဆောင်သော နေတိုးတပ်များကို ရှုံးနိမ့်ရန်အတွက် မြေပြင်ကို အောင်မြင်စွာပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့သည်။ ဆိုဗီယက်၊ အာဖဂန်နစ္စတန်သည် ပါဝါကစားရုံသာဖြစ်ပြီး၊ အမေရိကန်နှင့် နေတိုးတို့အတွက် ၎င်းသည် နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်မှု၏ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီး 9/11 ထိပ်တန်းအကြမ်းဖက်သမား အိုစမာဘင်လာဒင်၏ ပုန်းအောင်းရာနေရာဖြစ်သည်။
အမေရိကန်-နေတိုး စစ်ရေး စွက်ဖက်မှု၏ ရည်မှန်းချက်မှာ ထိုအချိန်က တာလီဘန် အစိုးရကို ဖြုတ်ချပြီး ဘင်လာဒင်ကို ဖမ်းဆီးရန် ဖြစ်သည်။ မစ်ရှင်နှစ်ခုစလုံးကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်ခဲ့သော်လည်း ပိုမိုကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုက အာဖဂန်နစ္စတန်ကို အနောက်ပုံစံဒီမိုကရေစီအဖြစ် ပေါင်းစည်းနိုင်ရန် အနောက်တိုင်းမဟာမိတ်ကို “ခဏနေ” ရန် ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ ဤပန်းတိုင်သည် ရှက်စရာကောင်းလောက်အောင် မအောင်မြင်ခဲ့ဘဲ၊ တာလီဘန်တောင်သူလယ်သမားများ၏ ပြည်သူ့စစ်များက ပြန်လာပြီး အမေရိကန်နှင့် နေတိုးကို အာဖဂန်နစ္စတန် ဟာရမ်စခရမ်မှ ထွက်ခွာရန် အတင်းအကြပ် ခိုင်းစေခဲ့သည်—သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရ သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု၊ ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာ အကုန်အကျခံကာ သံသယများစွာကျန်ခဲ့သည်။ သူတို့သည် ထာဝရဖြစ်သော်လည်း အဖြေမရသေးသည့်မေးခွန်းတွင် အဆုံးစွန်ဆုံးဖြစ်သည်- ဘာအတွက်လဲ။
ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲအကြောင်း အုံ့မှိုင်းသောသတိပေးချက်များ ပြန်ပေါ်လာသည်။ ၁၉၇၅ ခုနှစ် ဆိုင်ဂုံ ခေါင်မိုးပေါ်မှ ရဟတ်ယာဉ်များပေါ်မှ အံ့မခန်း လွတ်မြောက်မှု ဓာတ်ပုံများကို 1975 ခုနှစ်တွင် ကဘူးလ်လေဆိပ်မှ ကောင်းကင်ယံမှ ဓါတ်ပုံများ တွဲရိုက်ကာ စိတ်ပျက်လက်ပျက် လူများဖြင့် ပြည့်ကျပ်နေကာ အချို့မှာ လေယာဉ်၏ အောက်ခံဝန်ကို တွယ်ကပ်ကာ ပြုတ်ကျနေသည့် ဓာတ်ပုံများဆီသို့...
ဘယ်သူက အပြစ်ရှိလဲ။ ဘယ်သူကတာဝန်ယူမှာလဲ။ သင်ယူခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာတွေကရော ဘယ်လိုလဲ။
အစောပိုင်းက သင်ယူသင့်သည့် သင်ခန်းစာများကို နားမလည်နိုင် သို့မဟုတ် လက်ခံရန် ငြင်းဆိုခြင်းမှာ တာဝန်ရှိသည်- ပထမ၊ လူမှုပုံစံများနှင့် လူမှုဘဝနေထိုင်မှုပုံစံများကို အခြားသူများထံ အတင်းအကျပ် လွှဲပြောင်း၍ မရပါ - အာဖဂန်နစ္စတန်တွင် မည်သည့်နေရာမှ လုံးဝမပါဝင်ပါ။ ဒုတိယ၊ တပ်မတော်၏အလုပ်မှာ ကျောင်းများ၊ ဆေးရုံများ ဆောက်ရန်နှင့် ရေတွင်းများ တူးရန် မဟုတ်ဘဲ စစ်တိုက်ရန် ဖြစ်သည်။ တတိယ၊ စစ်ဘက်နှင့် အရပ်ဘက်ပရောဂျက် နှစ်ခုစလုံးသည် တင်းကြပ်ပြီး အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပုံသေအမြင်ရှိရန် လိုအပ်သည်၊ သို့မဟုတ် လူတိုင်း၏အကြောင်းရင်းကို ဖြစ်စေမည့် ရည်မှန်းချက်များ လိုအပ်သည် — နှင့် ကောင်းမွန်သော ရည်ရွယ်ထားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသာမက ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် ကြီးမားသော ထင်ယောင်ထင်မှားများစွာဖြင့်၊ ထို့အပြင် ပြည်တွင်းရှိ အထက်တန်းစားများနှင့် နိုင်ငံခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအကြား ရောယှက်နေသော ဆက်ဆံရေးသည် ဗမာပြည်သားများ နှင့် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတို့ကို ပိုမိုဖြစ်စေရန် ခိုင်မာသော သဘောထားရှိသည်။ ဤကဲ့သို့သော 'ဆက်ဆံရေးအန္တရာယ်များ' သည် ပဋိပက္ခ သို့မဟုတ် စစ်ပွဲကိုပင် မလွဲမသွေဖြစ်ပေါ်စေပြီး နောက်ဆုံးတွင် ကိုယ်လုံးတီးမငြိမ်မသက်ဖြစ်စေသည်။
မကြာခဏဆိုသလို၊ စိတ်ရောကိုယ်ပါ နှစ်ရှည်ခံစစ်ရေးကတိကဝတ်ပြုပြီးနောက်၊ နိုင်ငံခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာ ရှက်ဖွယ်ကောင်းသော လေယာဉ်ပျံသန်းမှု၏ ထပ်ခါတလဲလဲ အတွေ့အကြုံဖြင့် စနစ်တကျ ထွက်ခွာသွားခြင်းထက် စနစ်တကျ ထွက်ခွာသွားခြင်းထက် ရှက်ဖွယ်ကောင်းသော ပျံသန်းမှုအတွေ့အကြုံဖြင့် နိုင်ငံခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုသည် မြင်ကွင်းမှ ထွက်ခွာသွားပုံရသည်။ အထူးသဖြင့် လူမှု-ယဉ်ကျေးမှု ကွဲပြားမှုများကို ရှောင်ဖယ်ရန် ခဲယဉ်းလွန်းသည့် အချိန်တွင် အခြားနိုင်ငံများ၏ ပြည်တွင်းရေး ပြဿနာများမှ ထွက်ပေါ်လာသည်။ အင်္ဂလိပ်-ဒတ်ချ်စာရေးဆရာ Ian Buruma က 'ကိုလိုနီခေတ်ထောင်ချောက်' သည် ထိုအချိန်နှင့် ယခုအချိန်တွင် ကျရောက်မည့် ကြီးမားသောအာဏာစက်များကို ရည်ညွှန်းသည်။
ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီ NGO များအတွက် 'ကိုလိုနီထောင်ချောက်' စာတမ်းကို အသုံးချရန် အလွန်ဝေးကွာနေပါသလား။ ကန့်ကွက်မှုများသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကူအညီသည် မြင့်မားသောရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် နည်းပညာဆိုင်ရာပရောဂျက်များစွာ၏ နှစ်ရှည်ခံဇာတ်ကောင်ကို အဓိကပစ်မှတ်ထားသော်လည်း မြင်သာထင်သာသောရလဒ်အနည်းငယ်သာဖြစ်သည်။ နိုင်ငံခြားပညာရှင်များသည် လက်ကမ်းကူညီပံ့ပိုးမှုများနှင့် သင်တန်းဆရာများအဖြစ်သာမက ပြိုင်ဖက်ပြည်တွင်း အကျိုးစီးပွားအုပ်စုများအကြား ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဖျန်ဖြေပေးသူများအဖြစ်လည်း အကျိုးရှိနိုင်သည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ မတူညီသော အကြောင်းအရာများနှင့် ကန့်သတ်ချက်များတွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ကင်းလွတ်ခွင့်သာဖြစ်သည်။ ဖြစ်ချင်တော့၊ လူတစ်ဦးသည် အိမ်ရှင်နိုင်ငံတစ်ခု၏ ပြည်တွင်းရေးတွင် အလွန်အကျွံပါဝင်လာခြင်းကြောင့် သွေးဆောင်မှုသည် အမှန်တကယ်ဖြစ်ပြီး ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးမှ ထွက်ခွာသွားခြင်းသည် ၎င်း၏ဖြေရှင်းချက်ထက် ပြဿနာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လာခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုသာ မြင်ယောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အများအားဖြင့် 'Tourism' နှင့် 'အကြမ်းဖက်ဝါဒ' ၏ ကမောက်ကမ တူညီသော ကမောက်ကမ ဖြစ်တည်မှုဆိုင်ရာ ကမောက်ကမ ခံယူချက်ဖြင့် စကားလုံးများကို ပြတ်ပြတ်သားသား အသံထွက်ရခြင်းသည် မကြာခဏ လွန်စွာ တန်ဖိုးထားတတ်ပါသည်- ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် လွတ်လပ်မှုကို နှစ်သက်သည်၊ အကြမ်းဖက်မှုကို မုန်းတီးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် ၎င်း၏အဆိုးမြင်ဆုံးသောအသုံးအနှုန်းဖြင့် ဒေသတွင်းယဉ်ကျေးမှုကို ညင်သာစွာသတ်ပစ်နိုင်သော်လည်း အကြမ်းဖက်ဝါဒသည် ပစ်မှတ်ထားကာ ကရုဏာသက်မှုမရှိဘဲ ချက်ခြင်းသေဆုံးသွားသော်လည်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် ၎င်း၏ပထမဆုံးသားကောင်များထဲမှတစ်ဦးဖြစ်သည်။
အကြမ်းဖက်မှုတွေ အရှိန်ပြင်းလာတဲ့အခါ ခရီးသွားလုပ်ငန်းက ပွင့်မလာနိုင်ဘူး၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းက ငြိမ်းချမ်းရေးလိုတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖန်တီးထိန်းသိမ်းရန် ခရီးသွားနှင့် ခရီးသွားလာရေးသည် ထိထိရောက်ရောက် အထောက်အကူဖြစ်ကြောင်း မည်သို့ပြောနိုင်မည်နည်း။ အာဖဂန်နစ္စတန်သည် ငြိမ်းချမ်းပြီး သည်းခံနိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်ပြီး ခြောက်ဆယ်ကျော်အတွင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပန်းတိုင်အဖြစ် ထိန်းသိမ်းထားရန် ကြိုးပမ်းရာတွင် အခြားခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍကို ကြားဖူးပါသလား။
စစ်ပွဲအပြီး ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုခန့်တွင် ဗီယက်နမ်သည် အရင်းရှင်စနစ် (!) နှင့် အရင်းရှင်စနစ် (ကွန်မြူနစ်အစိုးရ) နှင့်ပင် အမေရိကန်နှင့် ကမ္ဘာနှင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးသော ဆက်ဆံရေးဖြင့်ပင် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ခရီးသွားနေရာတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေး စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများ၊ စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများ၏ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုနှင့် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် သမ္မတ ကလင်တန်၏ သမိုင်းဝင် လည်ပတ်မှုသည် အစိုးရနှင့် စီးပွားရေးကဏ္ဍ ဆက်ဆံရေးကို ၎င်းတို့၏ မန္တန်တစ်ခုအဖြစ် ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ခရီးသွားနှင့် ခရီးသွားလာရေးသည် လိုက်လျောညီထွေရှိသော်လည်း UNWTO သို့မဟုတ် WTTC ၏ ကတိကဝတ်များကို ပြသနိုင်သည့် ရှေ့ခြေလှမ်းများသည် ပြန်လည်သိမ်းဆည်းရန် ခက်ခဲပါသည်။
အာဖဂန်နစ္စတန်စော်ဘွားကြီးနှင့် ဆက်ဆံရေးကို ပုံမှန်ဖြစ်စေရန်အတွက် သတ္တိရှိသော အသေးစိတ်ပုံစံအဖြစ် ဗီယက်နမ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ယူနိုင်ပါသလား။ အစ္စလာမ္မစ် တာလီဘန်များကို ဖော်ရွေသော ဧည့်လမ်းညွှန်များအဖြစ် 2040 ခုနှစ်များဝန်းကျင်တွင် Hindu Kush ၌ စွန့်စားခရီးသွားခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်နိုင်ပါသလား။
ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲအပြီး အနှစ်နှစ်ဆယ်အကြာတွင် Samuel P. Huntington သည် သူ၏နိုင်ငံရေးဇာတ်ဝင်ခန်း 'The Clash of Civilizations' ကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်မှာ အရူးဟု ထင်ကောင်းထင်ကောင်း ခေါင်းခါကာ ခေါင်းခါသွားနိုင်သည်။ ဟန်တင်တန်၏ သီအိုရီအရ အနာဂတ်စစ်ပွဲများသည် နိုင်ငံများကြားတွင်သာမက ယဉ်ကျေးမှုများကြားတွင် အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဆွေးနွေးမှုများဆီသို့ ဦးတည်စေသည် - နှင့် 'Dialogue Among Civilizations' ၏ ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာမှု၊ ဩစတြီးယား ဒဿနပညာရှင် Hans Köchler က 1972 ခုနှစ်တွင် ကာကွယ်ခဲ့သော ယူနက်စကိုထံသို့ ပေးပို့သော စာတစ်စောင်၌ တန်ပြန်သီအိုရီတစ်ခု၊ မေ့လျော့ထားခဲ့တယ်။
လက်ရှိအခြေအနေသည် တူညီသောနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာများမှတစ်ဆင့် 'ယဉ်ကျေးမှုများ' အကြား ဆွေးနွေးမှုကို အသစ်ပြန်လည်သက်တမ်းတိုးရန် ၎င်း၏အထွတ်အထိပ်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော UNWTO နှင့် WTTC တို့နှင့်အတူ ခရီးသွားနှင့် ခရီးသွားလာရေး၏ စွက်ဖက်မှုအား တရားမျှတမှုမရှိဟု ထင်မြင်သာထင်သာအောင် တွန်းအားပေးလုပ်ဆောင်ရန် စိတ်ကူးမဟုတ်ပါလား။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအားဖြင့် ငြိမ်းချမ်းခြင်း - မသာသော်လည်း၊
အတွေးအမြင်နှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ ပေါင်းစည်းရန် ခရီးသွားနှင့် ခရီးသွားလာရေးအတွင်း ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ စိတ်တူကိုယ်တူ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ ပါဝင်ရန် မက်ဆေ့ချ်က တောင်းဆိုထားသည်။ Louis D'Amore ၏ တည်ထောင်သူနှင့် ကာလကြာရှည် သမ္မတအဖြစ် စိတ်ကူးစိတ်သန်းများ စိတ်ကူးစိတ်သန်းဖြစ်နိုင်သည် ။ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှတစ်ဆင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း.
ကောင်းပြီ၊ အကောင်းမြင်ဝါဒီများ၏ အခွင့်ထူးအဖြစ် အိပ်မက်မက်ပြီး စွမ်းအားမဲ့သူ၏လက်နက်ကို အထေ့အငေါ့လုပ်ပါ - အင်အားကြီးသူများသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပြဿနာများ ရှိလိမ့်မည်- ရုရှားဝက်ဝံသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် 'အာဖဂန်နစ္စတန်' အတွေ့အကြုံမှ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီး သူ့ကိုယ်သူ ပြန်လည်ပြင်ဆင်နေချိန်တွင် US Eagle နှင့် ၎င်း၏ အတ္တလန်တိတ်ဖြတ်ကျော် ဟမ်မင်ငှက်များသည် ၎င်းတို့၏ မအောင်မြင်သော မစ်ရှင်မှ ၎င်းတို့၏ ဒဏ်ရာများကို လျှာဖြင့် နမ်းရန် အလုပ်များနေသေးသည်။ တရုတ်နဂါးသည် ၎င်း၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြိုင်ဘက်များ၏ အရှက်တကွဲအရှက်ရမှုအပေါ် ဆိုးသွမ်းသော အပြုံးဖြင့် မခံမရပ်နိုင်။ ကမ္ဘာကြီးသည် စစ်အေးတိုက်ပွဲမှ ချက်ချင်း အေးအေးချမ်းချမ်းသို့ ရွေ့လျားသွားပုံရသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးမျှသာထက် အနည်းငယ်ပို၍ 'ပူပြင်းသော' နိုင်ငံရေးရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကို စွန့်စားရလောက်အောင်ပင်၊ Huntington ၏ ယဉ်ကျေးမှု 'ပြတ်ရွေ့ကြောများ' တစ်လျှောက်တွင် ဖြစ်နိုင်သော်လည်း အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ရှေးဟောင်းအကျွမ်းတဝင်ရှိသော အနောက်-အရှေ့ ပိုင်းခွဲဝေမှုတစ်လျှောက်တွင် ဖြစ်နိုင်သည်။ အတွေးအခေါ်ပညာရှင် Leibniz ကပြောသည့်အတိုင်း နိုင်ငံရေးမျက်စိကန်းခြင်းသည် “ဖြစ်ရပ်များပြန်စသည့်ပုံစံများ—သို့သော် အများစုအတွက်သာဖြစ်သည်” ဟူသောအယူအဆကို ကျော်ဖြတ်ရန် ခက်ခဲသည်။ ကုလားကာကြီး ပျောက်ကွယ်သွားကတည်းက နိုင်ငံရေးဖန်တီးမှု ဒေဝါလီခံလိုက်တာ။
ဤပုံစံများနှင့် ပတ်သက်၍ မထင်မှတ်ထားသော နောက်ထပ် သီအိုရီတစ်ခု ရှိသေးသည်– “လူသည် ဓားပြအဖြစ် ကမ္ဘာကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သောအခါ၊ လောကသည် သူ့အား ဓားပြအဖြစ် ဆက်လက်နေထိုင်ရန် တွန်းအားပေးလိမ့်မည်။ ဒါဟာ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ တုံ့ပြန်မှုပါပဲ၊ ကလဲ့စားချေတာပဲလို့ ပြောလို့ရပါတယ်” လို့ 'Die Dämonen kehren wieder' ('The Return of the Daemons') မှာ Ludwig Fusshoeller က ပြောပါတယ်။ ကျူးကျော်သူဟု သတ်မှတ်ခံရသော ဧည့်သည်များကို ရိုးရှင်းသော ခရီးသွားများ၊ ဖြန့်ကျက်သော စီးပွားရေးသမားများ သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားစစ်တပ်များမှ ဆက်ဆံခံရမည်ဖြစ်သည်။ - ငါတို့ဘာပြောနိုင်မလဲ။ 'နှုတ်ဆက်ခြင်း' ယဉ်ကျေးမှုကို ကြိုဆိုရုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။
Goethe ၏နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောဒရာမာတွင် Faust ၏စစ်မှန်သောပန်းတိုင်ကိုသဘာဝတရားအပေါ်သူ၏ကိုယ်ပိုင်အောင်ပွဲမှဆုံးဖြတ်သည်။ သို့သော်၊ သူ၏အတ္တဗဟိုပြုပရောဂျက်ကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်ရခြင်းအတွက် အလွန်တရာ ပျော်ရွှင်ခံစားရသကဲ့သို့၊ Mephisto နှင့် သူ၏လောင်းကြေးကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီး “ဒါဆို၊ 'ခဏနေပါဦး။ မင်းက အရမ်းချစ်စရာကောင်းတယ်!'"
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာကိုကြည့်လျှင် 'Faustian ကမ္ဘာကြီး' သည်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပြန်ဖြစ်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိကြပြီး၊ လှပမှုသည်ယခင်နှစ်၏စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသောတံလျှပ်နှင့်အိမ်ရှင်နှင့်ဧည့်သည်များ၏အချိန်မပြည့်မီသောဆန္ဒ၊ ကပ်ရောဂါ၏ခြောက်လှန့်သောကျိန်စာဖြင့်ဖြည့်စွက်ခဲ့သည် - “ခဏနေဖို့…”
စာရေးသူ, မက်စ် Haberstroh၊ တည်ထောင်သူအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည် ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းကွန်ယက် (WTN).